ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါသော 22 ကြိမ်မြောက် 8.8.88 အခမ်းအနား (ဆစ်ဒနီ) ~ Nge Naing
ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါသော 22 ကြိမ်မြောက် 8.8.88 အခမ်းအနား (ဆစ်ဒနီ)
Tuesday, August 10, 2010 Nge Naing 18 comments
z ရေချိုးဖို့ပြင်နေတုန်း ဖုန်းသံမြည်လာလို့ အလုပ်က ဖုန်းများလားလို့တွေးပြီး ကောက်ကိုင်လိုက်တော့ "အစ်မ ဘယ်ရောက်နေလဲ" လို့ မေးလိုက်တဲ့ အမျိုးသားတဦး အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ အသံကို မမှတ်မိတာနဲ့ ဘယ်သူပါလိမ့်လို့ တွေးပြီး အိမ်မှာပဲ ရှိနေကြောင်းနဲ့ ဖုန်းဆက်တာ ဘယ်သူလဲ မသိဘူးလို့ မေးလိုက်တော့ "ကျနော် ကျော်ခွိလေ အခမ်းအနားမှာ ရောက်နေတယ်၊ နေ့လည်ကလည်း အစ်မကိုမတွေ့ဘူး အလုပ်သွားတာလား၊ အခုကော မလာသေးဘူးလား အခမ်းအနားစတော့မယ်လေ" လို့ တောက်လျှောက် မေးလိုက်တော့ ဘာကိုအရင်ဖြေလို့ ဖြေရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ပိုသက်ဆိုင်တဲ့ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အစီစဉ်ကို နေ့လည်က လုပ်တဲ့ Public Awarenenss ကိုလည်း မသွားဖြစ်၊ အခု ညနေအစီစဉ် ဖြစ်တဲ့ အခမ်းအနားကိုလည်း စောကျော်ခွိက အရင်ရောက်နင့်နေတာကို တွေးပြီး ကိုယ့်အရေးမှာ ကိုယ်က ပိုတက်ကြွရမည့်အစား သူများက ပိုတက်ကြွနေတာကို တွေးပြီး နည်းနည်းရှက်သလို ခံစားမိတယ်။ စောကျော်ခွိ ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာ ရေတောင်မချိုးရသေးလို့ ရေချိုးပြီးမှ လာမယ်လို့ အကြောင်းပြန်လိုက်ပြီး ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းသွားဖြစ်ပါတယ်။
ဗွီဒယိုက ဆစ်ဒနီအခမ်းအနားက မဟုတ်ပါ။ DVB က မသီတာ Face Book မှာ တင်ထားတာကို သဘောကျလို့ ခွင့်တောင်းပြီး ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီနှစ် ဆစ်ဒနီမှာလုပ်တဲ့ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အစီစဉ်ကို ဖြစ်မြောက်အောင် ABSDF Australia Branch က စတင်ဦးဆောင် ကမကထပြုပြီး ဆစ်ဒနီရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးကို လိုလားတဲ့ သြစကြေးလျားလူမျိုးများ (Burma Campaign Australia က အော်စီတွေကို ဆိုလိုပါတယ်) ညှိနှိုင်းပြီး စုပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံ စောကျော်ခွိ)
အစီစဉ် နှစ်ခုရှိပြီး နေ့လည်ဘက် အစီစဉ်ကို Media Attention နှင့် Public Awareness အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ရဲ့ ဒုတိယ လူစည်ကားဆုံးနေရာ ဖြစ်တဲ့ Parramatta Westfield Shoping Centre ကနေ ဘူတာရုံရဲ့ ဟိုဘက်ခြမ်းရှိ Parramatta Towhall ရှေ့မှာ ပိုစတာတွေနဲ့ ခင်းကျင်းပြသပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကို မြန်မာပြည် ဒီမိုကရစီအရေးနဲ့ ပတ်သက်တာကို သိစေတဲ့ အစီစဉ် ဖြစ်တယ်။ (ဓါတ်ပုံ စောကျော်ခွိ)
နယူးဆောက်ဝေး လွှတ်တော်အမတ် တဦးကို Guest Speaker အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ကာ စကားပြောစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအစီစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဖို့ သြစကြေးလျား လူထုဆီက လက်မှတ်တွေ စုဆောင်းပြီး နယူးဆောက်ဝေး အစိုးရကတဆင့် သြစကြေးလျား အစိုးရကို ပို့ပေးဖို့ အစီစဉ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ နေ့လည်ဘက် အစီစဉ်ကို တနာရီကနေ သုံးနာရီခွဲအထိ ပြုလုပ်ပြီး ညဘက်မှာတော့ Lidcobme က Ucrinaia Hall မှာ ၂၂ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားကို ညနေ ငါးနာရီကနေ ည ၁၀ နာရီအထိ ကျင်းပပါတယ်။ ကျွန်မကနေ့လည်ဘက် လုပ်တဲ့ဆီကို မသွားဖြစ်ဘဲ ညနေဘက် လုပ်တဲ့ အခမ်းအနားနဲ့ Fundraising အစီစဉ်ကိုပဲ သွားဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာလည်း အစအဆုံးအထိ နေဖို့ အချိန်မရတဲ့အတွက် ဒီပို့စ်ကို သတင်းတခုအနေနဲ့ မရေးဖြစ်တော့ဘဲ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းလေးအဖြစ်ပဲ ရေးဖြစ်တော့တယ်။ (ဓါတ်ပုံကို ABSDF Australian Branch မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။)
ညနေပိုင်း အစီစဉ်မှာ Fundraising နဲ့ အခမ်းအနား အစီစဉ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်မတို့ မိသားစုရောက်တော့ အခမ်းအနားမစခင် ထုံးစံအတိုင်း Fundraising အတွက် အစားအသောက် ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ လူတွေ ပြည့်နေပါတယ်။ တချို့ကလည်း ရောင်းချတဲ့ နေရာမှာ ၀ယ်ပြီး အခမ်းအနားလုပ်မည့် ခန်းမထဲက ခုံတွေမှာ ၀င်ထိုင်စားနေကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုလည်း ဒီနေ့အတွက် ညနေစာကို အဲဒီမှာပဲ စားဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားလာတဲ့သူ အများစုလည်း ညနေစာကို ဒီမှာပဲ လာဝယ်စားကြပြီး အိမ်ပြန်ယူသွားဖို့ပါ ၀ိုင်းဝန်း ၀ယ်ယူအားပေးနေကြပါတယ်။ ရတဲ့ပိုက်ဆံကို မြန်မာပြည်တွင်းမှာ လုပ်နေသူတွေဆီ ပို့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆစ်ဒနီကိုရောက်တာ ကိုးနှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ ကျွန်မက မြန်မာတွေ လူစုလူဝေးရှိတဲ့နေရာကို အခုလို အခမ်းအနားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းအလှူတွေ ရှိတဲ့အခါတွေမှ တခါတခါ ရောက်တော့ လူသိသိပ်နည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် တွေ့ရတဲ့လူ အတော်များများက မျက်နှာစိမ်းတွေက ပိုများနေပါတယ်။ သိသူမသိသူတွေထဲမှာ သြစကြေးလျားလူမျိုး တချို့ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာထဲက ဒီရောက်ပြီးမှ သိတဲ့သူတွေကိုတော့ တမြို့တည်းနေပေမဲ့ အမြဲတွေ့နေရတာ မဟုတ်တော့ နောက်တခါပြန်တွေ့ရင် နာမည် မေ့နေတတ်တော့ မကြာခဏ နာမည်ပြန်မေးရနဲ့ ကျွန်မ မေ့တတ်ပုံက တခါတလေ သိပ်အားနာဖို့ကောင်းပါတယ်။
အဲဒီညကလည်း တွေ့တဲ့သူအတော်များများကို ကျွန်မ နာမည်မမှတ်မိဘဲ ဖြစ်နေတော့ ပြန်မေးခဲ့ရပါတယ်။ လူချင်းသိပြီးသားသူတွေထဲမှာရော မသိဖူးတဲ့သူတွေအထဲမှာပါ ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ကို လာဖတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကိုလည်း တွေ့ရလို့ ပီတိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနား အကြောင်း ဆက်ရရင် ကျွန်မတို့ စားနေသောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ အခမ်းအနားမှူး လုပ်သူ ဒေါက်တာမြင့်ချိုက အစီစဉ်ကြေညာနေတာကို ကြားရပါတယ်။ အပြင်မှာ ဆူညံနေတာနဲ့ မကြားတချက်ကြားချက်ပါပဲ။
စားပြီးသောက်ပြီးလို့ ခန်းမဘက်ကို ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် "အစ်မနေကောင်းလား" လို့ အနောက်ကမေးလိုက်လို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ဆစ်ဒနီ ကရင်ဘလော့ဂါ တဦးဖြစ်သူ အဲခေါင်သောင့် ဖြစ်နေတယ်။ စောကျော်ခွိ တယောက်ပဲ လာမယ်လို့ သိထားရာကနေ အဲခေါင်သောင့်ကိုပါ တွေ့ရလို့ ၀မ်းလည်းဝမ်းသာ အံ့လည်းအံ့သြသွားတယ်။ အခမ်းအနားလာတာ ၀မ်းသာတဲ့အကြောင်း ပြောတော့ “ကျနော်က ဒုံးအကလည်း ကဦးမှာ” ဆိုတော့ ခုနက ဒေါက်တာမြင့်ချို အစီစဉ်ကြေညာရာမှာ ဆူညံနေလို့ ကရင်ဒုံးယိမ်း ပါတယ်ဆိုတာ မကြားလိုက်မိတော့ နောက်နေတယ်ထင်တယ်။ နောက်တော့ စောကျော်ခွိနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ စောကျော်ခွိ ပြောပြမှ အဟုတ်ဖြစ်နေတယ်။ (ဒုံးယိမ်းအက ဓါတ်ပုံကို ABSDF Australian Branch မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။ ညာဘက် အထိပ်ဆုံးမှာ ကနေတဲ့ အမျိုးသားက ဆစ်ဒနီ ကရင်ဘလော့ဂါ အဲခေါင်သောင့်ဖြစ်ပါတယ်။)
အခမ်းအနားကို ရှစ်လေးလုံးကာလ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံတွေကို ဆလိုက်ထိုးပြသခြင်းနှင့် ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်တို့ရဲ့ ၁၉ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတို့ကို အစီစဉ် နံပတ် (၁) အဖြစ် အရင်ပြသပါတယ်။ ခန်းမထဲရောက်ပြီး စတိတ်စဉ်ရဲ့ နောက်ခံပိတ်သားကို ကြည့်လိုက်တော့ 22nd Anniversary of 8.8.88 ဆိုတာပဲ ရေးထားပြီး နေ့စွဲမပါ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဆိုတာမပါ၊ ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါတာကို ချက်ချင်း သတိထားမိသွားတယ်။ ဒီအခမ်းအနားက ဓါတ်ပုံတွေကို နောက်နှစ်တွေမှာ တနေရာမှာ သွားတွေ့လို့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်နေရာမှာ လုပ်ထားတဲ့ ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနားဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကလည်း ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါလို့ နောက်နှစ်တွေမှာ ဒါကိုအလေးအနက်ထားသင့်တယ်လို့ ABSDF Australia Branch ကို ကျွန်မ အကြံပေးဖူးပါတယ်။ အခုဒီနှစ်မှာလည်း မတွေ့ရပြန်တော့ ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားမှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို မတွေ့ရတာဟာ လုံးဝ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ ကျွန်မ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ၈၈ က မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံတွေက ကျွန်မကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၂ ကို ပြန်ရောက်သွားစေသလို ခံစားရပါတယ်။ ဗွီဒယိုကို ဆလိုက်ထိုးနေတဲ့အထဲမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ကျောင်းနံရံတ၀ိုက် ဒေါင်းအလံပြန်စိုက်မယ် ဆိုတာကို ကြားရပြန်တော့ ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါတာကို မေ့သွားပြီး ကျွန်မ တကိုယ်လုံးကို ကြက်သီးမွေးညှင်း ထစေခဲ့ပါတယ်။
Slide ထိုးတာတာကို ပြသလို့အပြီးမှာတော့ မြန်မာသံစဉ်နဲ့ သီဆိုတဲ့ ရှစ်လေးလုံးကာလ သီချင်းတွေနဲ့ မိန့်ခွန်းပြောကြားချက်တွေကို တလှည့်စီ တင်ပြပေးပါတယ်။ မိန့်ခွန်း ပြောကြားသူတွေကတော့ Greens ပါတီက နယူးဆောက်ဝေး ပါလီမန်အမတ်တဦးဖြစ်သူ Dr John Kaye, Burma Campaign Australia မှ ဒေါက်တာကျော်မြင့်၊ ၉၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက လွတ်တော်အမတ်တဦး ဖြစ်သူ ဦးတင်ထွဋ်၊ ABSDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတဦး ဖြစ်သူ မစန်းစန်းမြင့်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံကို ABSDF Australian Branch မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။)
Dr John Kaye ပြောသွားတဲ့ လိုရင်းကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ရာစုနှစ်တ၀က်စာ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ဒုက္ခဆင်းရဲစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတယ်။ စစ်အစိုးရ အခုပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း ဘယ်သူ့ကိုပဲ မဲပေးပေး စစ်အစိုးရအတွက်သာ အကျိုးဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် ဘာအကျိုးမှ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ကမ္ဘာတခုလုံး သိအောင် လုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း၊ ဒီလိုလုပ်ရာမှာ သြစကြေးလျားဟာ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာ့အရေးကို ဦးဆောင်တဲ့ နိုင်ငံတခု ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောပါတယ်။ မကြာတော့တဲ့ အချိန်ကာလမှာ သူ့အနေနဲ့ ဒီလို ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်မှာကို ဆုတောင်းကြောင်း တနေ့ ဒီလို ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှောင်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာ ကျော်မြင့်ကတော့ သူက နိုင်ငံရေး သိပ်လုပ်မတတ်ဘူး ဆေးပဲကုတတ်ပါတယ် ဆိုတာနဲ့ အစချီပြီး ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ ဒုက္ခဆင်းရဲ ရောက်နေတာကို မကြည့်ရက်လို့ နိုင်တဲ့ဘက်က ၀င်ပါရကြောင်းကို စပြောပါတယ်။ Burma Campaign Austaralia မှာ ပါဝင်တဲ့ သြစကြလျား လူမျိုးတွေက မြန်မာပြည်အရေးကို တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ အချိန်တွေပေးပြီး မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒုက္ခအ၀၀ကို စာနာထောက်ထား နားလည်လို့ ၎င်းတို့အတွက် ဘာအကျိုးမှ မရှိဘဲ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြပေမဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေထဲက သိပ်ကိုအင်အားနည်းလို့ အားဖြည့်ဖို့ လိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပါတယ်။ သြစကြေးလျား အစိုးရကို မြန်မာပြည်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ချနိုင်ဖို့အတွက် ကမ်ဘာရာမှာ အကြိမ်ကြိမ် Lobby သွားလုပ်ခဲ့ရကြောင်းနဲ့ နှစ်တွေ ကြာလာတော့ တချို့မိတ်ဆွေတွေက ၂၂ နှစ်တောင် ရှိပြီ အခုထိ မအောင်သေးဘူး ဘယ်တော့ အောင်မလဲ ဘယ်အထိ လုပ်မလဲဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ မိတ်ဆွေ တချို့ရဲ့ အမေးခံရတဲ့အချိန်မှာ ဒေါက်တာ ကျော်မြင့်က သူလုပ်နိုင်နေသေးသရွေ့တော့ အဓမ္မနဲ့ ဓမ္မပြိုင်ပွဲမှာ ဓမ္မဘက်က သေတဲ့အထိ လုပ်သွားမယ်လို့ ပြန်ဖြေခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောသွားတော့ ၈၈ မတိုင်ခင်ကတောင် အပြင်ရောက်နေတဲ့ အဝေးရောက် မြန်မာတယောက်ရဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် ထားတဲ့သဘောထားက ကျွန်မအတွက် တကယ်ကို အမှတ်တရ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဦးတင်ထွဋ်ကတော့ ၈၈ ကနေ အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိ န၀တ၊ နအဖတို့ လုပ်လာတဲ့ လုပ်ရပ် အကျဉ်းချုပ်ကိုပြောကြားသွားပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ တဘက်သတ် ရေးဆွဲထားတဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို လုံးဝ Review ပြန်မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာက ဒီရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်မပြုဖို့နဲ့ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မလုပ်ကြဖို့ တောင်းဆိုရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားတာကို ဒေါက်တာမြင့်ချိုက ဦးတင်ထွဋ် ပြောအပြီးမှာ သြစကြေးလျား ပရိတ်သတ်တွေ နားလည်အောင် အင်္ဂလိပ်လို အတိုချုပ်ပြန်ပေးပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံ စောကျော်ခွိ)
မစန်းစန်းမြင့်က ABSDF မှာ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေတဲ့ ဘ၀တက္ကသိုလ်မှ နီဝန်းနီနီ သီချင်းခွေမှာ ဘ၀တက္ကသိုလ် သီချင်းကို သီဆိုသူ ဖြစ်ပါတယ်။ DVB အသံကို စတင်လိုက်တာနဲ့ "ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ ပြည်သူများအတွက် လွှင့်ပြန့်လာခဲ့ပြီ" လို့ စုံတွဲသီဆိုရထားတဲ့ သီချင်းမှာ အမျိုးသမီး အသံရှင်က မစန်းစန်းမြင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းအနားမှာ သူပြောသွားတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂ နှစ် ဒီလိုအချိန်က သူက အသက် ၁၆ နှစ်ဖြစ်ပြီး အခု သူ့သမီး အမွှာညီနှမနှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်အရွယ် ဖြစ်ကြောင်း သို့သော်လည်း သူဒီအရွယ်က ဘ၀နှင့် သူ့သမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀တွေ ကွာခြားပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကာ ပြောသွားပြီး ၈၈ ကာလ ၎င်းအသက် ၁၆ နှစ်ကာလမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပုံ၊ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး တောတွင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း ယောက်ျားတွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းပြီး ABSDF ကျန်းမာရေးဌာမှာ ဆေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သလို ပြန်ကြားရေးဌာနမှာလည်း အဆိုတော်မဟုတ်ပေမဲ့ တော်လှန်ရေးရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ သီချင်းဆိုသူအဖြစ် တာဝန်တွေ ထမ်းလာခဲ့ပုံကို ပြောပြသွားပါတယ်။
ဟောပြောသမားတွေနဲ့ မြန်မာသံစဉ် ဖျော်ဖြေရေး အစီစဉ် အပြီးမှာတော့ အမျိုးသားက ညဘက်အလုပ်သွားစရာ ရှိလို့ အိမ်ပြန်လာလိုက်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် တေးဂီတနဲ့ အစီစဉ်နှင့် တခြားအစီစဉ်တွေကို ဆက်ကြည့်ဖို့ အချိန်မရခဲ့ဘူး။ လာမည့် ABSDF နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားမှာတော့ ခွပ်ဒေါင်းအလံတော် နောက်ခံကို ဖြစ်အာင်ထည့်ဖို့ ABSDF Australia Branch က ကိုအောင်နိုင်တို့ ကိုနိုင်အောင်တို့ကို လူသိရှင်ကြား အကြံပြုချင်ပါတယ်။ နောက်နှစ် မှာ ကျင်းပမည့် ရှစ်လေးလုံးနေ့ အခမ်းအနားမှာလည်း ခွပ်ဒေါင်းအလံတော် နောက်ခံကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ (ဓါတ်ပုံကို ABSDF Australian Branch မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါတယ်။)
သီချင်းများကို ဆက်လက်နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ပို့စ်မှာ ကြိုတင်ထားတဲ့အတွက် အတော်များများ နားထောင်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီသီချင်းတွေက ဒီနှစ်မှာ တိုက်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ အရင်နှစ်က ဆိုထားတာကို အခမ်းအနားမှာ ပြန်ဆုံလို့ မတိုက်ပဲနဲ့ ပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေတိဂုံသိပိတ်ကို ဆိုထားတာ အရင်က ABSDF တပ်ရင်း (၂၀၈) သောင်ရင်းစခန်းက တပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်ပြီး အောက်က အုပ်စုသီချင်းမှာ လေးယောက်အနက် အလယ်က နှစ်ယောက်က ABSDF တပ်ရင်း (၂၀၈) ခုနကတယောက်နဲ့ အမျိုးသမီးက ABSDF တပ်ရင်း (၂၀၁) မင်းသမီးစခန်းက မကဒတရဲ့ ၉၀ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားလာတာ တွေ့လို့ စဉ်ပေါ် သီချင်းဆိုဖို့လူလိုနေတာနဲ့ ခေါ်တင်ပြီး သီချင်းဆိုခိုင်းလို့ မတိုက်ထားပဲ ဆိုနေတာ ဖြစ်ပေမဲ့ တက်ကြွပုံကတော့ ငယ်တုန်းကနဲ့ ဘာမှ မကွာသလိုပဲ။ ဘေးကတယောက်ကတော့ ဆစ်ဒနီရောက် မျိုးဆက်သစ် ညီမငယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘက်ဘေးက အစ်ကိုတယောက်ကလည်း ဆစ်ဒနီရောက် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာသံစဉ်ကို မကြိုက်သူတွေအတွက် သီချင်းကို နှစ်သက်လိမ့်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ သီချင်းစာသားကတော့ သိပ်ကိုအဓိပ္ပါယ်ရှိလို့ သီချင်းစာသားနဲ့ တွဲကြည့်လို့ရအောင် စာသားတွေကို ဗွီဒယိုအောက်မှာ ပြန်ထည့်ပေးပါတယ်။
လာချေပြီ လက်ရုန်းဆန့်တန်း အောင်လံလွှင့်လို့ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြခဲ့ သည်
သပိတ် သပိတ် …. မှောက်မှောက်
မီးတုတ် မီးတုတ် ရှို.ရှို.
(ရေးတော်ပု … အောင်ရမည်)၂
ဘာမထီ.. ဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုး အုပ်စိုးမှုကို တွန်းလှန်ဖြိုဖျက် တိုက်ပွဲဆက်ခဲ့ပြီ
လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းဝင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ တက္ကသိုလ်နန်းမှဆီ
စစ်မှန်သောတောင်းဆိုချက်နဲ့ ပြည်သူ့ဘဝလမ်းသွေးလမ်းလှစ်ပြ ကြွေးကြော်ကြလို့ညီ
ရွှေတိဂုံအောင်မြေနန်းမှာ သပိတ်စခန်းကိုဖွင့်ရေချိန်မြှင့်လို့ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ သံကွန်ခြာ အာဏာမိုးကိုရိုတ်ချိုးချေဖျက် ဖွင့်ထွက်ခဲ့ကြပြီ။
မ……. (ဒို့ပြည်ဒို့အရေး ဒို့သွေးညီညာ ညီညာအုံကြွ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီ (ညီညွတ်ရေးရဲ့သွေးသစ်ဆီ)၂ သင်းချီ ထုံ ပျံ့ ရနံ့လှိုင် သီတဂူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြွေကြော်သံပြိုင် ညီ)
xxx ကျား………. (ဒို့ပြည်ဒို့အရေး ဒို့သွေးညီညာ ညီညာအုံကြွ ဆန္ဒပြခဲ့ပြီ ညီညွတ်ရေးရဲ့သွေးသစ်ဆီ သင်းချီ ထုံ ပျံ့ ရနံ့လှိုင် သီတဂူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြွေကြော်သံပြိုင် ညီ)
xxx မ…. ဒို့ပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာသည် ဒို့ ပြည်အလှည့်ပြန်လာပြီ ဒို့ပြည်သူ့ အာဏာသည် ဒို့ပြည်သူ့ ပြန်လာပြီ။
ကျား….. ပြည်သူအရေးတော်ပုံ အုံကြွ တောင်းဆို
ကျား/မ… ဒီမိုကရေစီ x ဒီမိုကရေစီ
မ x ညီညီ ညီညီ ကျောင်းသားတို့ရဲ့ သွေးတွေစတေးခဲ့ပြီ
ကျား xxx ချီချီ ချီချီ ခွပ်ဒေါင်းတောင်ပံ အောင်လံလွှင့်လို့ပြန်လာပြီ
ကျား/မ .. (ညီညွတ်ရေးရဲ့သွေးသစ်ဆီ)၂
မ xxx (အရေးတော်ပုံ/ (ကျား).. အောင်ရမည်)၂
ကျား.. မြို.တွေဆီ တောတွေဆီ တောင်တွေဆီနယ်တွေဆီ
မxxxx လျှိုမြောင်းမြစ်ချောင်း ပြောင်းပြောင်းဆန်ပေသည်
ကျား/မ xxx မြန်မာပြည် မြန်မာပြည် ဒို့ချစ်မြတ်တဲ့ အနာဂါတ်နိုင်ငံသည်
ကျား/မ xxx (ဒီမိုကရေစီ / (ကျား) ဒီမိုကရေစီ) ၂
အာဇာနည် ရာထောင်ပေါင်းရဲ့ သွေးရောင်အောင်လံနီ
ကျား/မ ..ဟေ့ ညီညီ ဟ.. ချီချီ ညီညွတ်ရေးရဲ့ သွေးသစ်ဆီ ညီညွတ်ရေးရဲ့ သွေးသစ်ဆီ
တီးလုံး xxxxxxxx (အစအဆုံး တခေါက်ပြန်ဆို)
(ဒို့ပြည်ဒို့အရေး ဒို့သွေးညီညာ xxxxxxx xxxxxxxx(ညီညွတ်ရေးရဲ့ သွေးသစ်ဆီ ညီညွတ်ရေးရဲ့ သွေးသစ်ဆီ )၃
ကျား xxx သင်းချီ ထုံ ပျံ့ ရနံ့လှိုင် သီတဂူ ပြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြွေးကြော်သံတွေ စီ)
လိုအပ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့ကို ပို့လာပေးတဲ့ စောကျော်ခွိကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တိုက်ပွဲဝင်ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်နဲ့ ရှစ်လေးလုံးမှာ အသက်ပေးသွားသော သူရဲကောင်းအပေါင်းအား အလေးပြုလျက်။
Posted in: ဗွီဒီယို,မှတ်တမ်း,သမိုင်းဝင်နေ့များ,သီချင်း,ဆောင်းပါး
August 10, 2010 at 5:51 AM Reply
တယူသန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ရှစ်လေးလုံးအခမ်းနားက ခွပ်ဒေါင်းအလံက ကျောင်းသားတွေကိုယ်စားပြုလို့ အဓိကကျပါတယ်။ မရှိတာက ကျနော်အတွေ့ကြုံ အရဆို ခွပ်ဒေါင်းအလံပို ဗမာအလံလို့ သတ်မှတ်ပြီး ၁၉၈၉ တချိန်က Bangkok က ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အငြင်းပွါးဘူးတယ် နောက်ဆုံးလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အခုအဲဒီက အနေထားလို ဖြစ်နေတာကို အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို။ ပြုံးပျော်ကခုန်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ မြင်တော့ ပြောခြင်တာက ယဉ်ကျေးမှုများပွဲထုက်ပြမယ့် ပရိုမိုးရှင်းပွဲ တခုမဟုတ်တာတော့ အမှန်ပါဘဲ အမရေ။ အခုလို စီစဉ်ကြသူတွေက တကယ်ဘဲ မသိတာတော့ မဟုတ်ကောင်းလောက်ပါဘူး။ ဒီလို သိသိကြီးနှင့် လုပ်တာကတော့ အမရေ။ မပြေးသော်လဲ ကန်ရာရှိ ဆိုသလို စော်ကားတာလိုလို ပေါ့ပျက်ပျက်လုပ်လိုက်တာ လိုမျိုးကြီးတော့ ဖြစ်နေတာ အမှန်ပါဘဲ အမရေ။ အခမ်းအနား စီစဉ်သူတွေက သမိုင်းကိုကွေးအောင်လုပ်တယ်လို့ဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်
ဖတ်သွားပါတယ်တော်.. သီချင်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဆိုနေတဲ့ အပြာရောင်နဲ့ အမျိုးသမီးက မစန်းမြင့်လား.. ဘယ်သူတုန်း.. အားရစရာပဲ ဆိုနေတာ..။
ဒေါင်းအလံလား.. မရှိလို့ မတပ်တာ ဖြစ်မှာပေါ့..။ ဒေါင်းအလံ တပ်ခြင်း မတပ်ခြင်းထက်.. လူတွေရင်ထဲမှာ ၈၈ ဟာ ဘာလည်း ဆိုတာက ပိုအရေးပါမယ်ထင်တာပဲ..။ တပ်လိုက်တော့ ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့.. ။ ဒေါင်းအလံက ၈၈ ကျောင်းသားတွေက က စသုံးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ သိပ်အငြင်းပွား မနေစေချင်ပါဘူး.. ကိုယ့်သဘော ကိုယ်ရေးတာ .. အပေါ်က တယောက်လည်း ချိတ်ဆိုးနဲ့.. ဟဲ..။
August 10, 2010 at 6:26 PM Reply
10 Aug 10, 10:20
10 Aug 10, 10:18
soe: if you don't know, you don' do it.
10 Aug 10, 10:17
soe: Whatever who celebrate 8888 anniversary, you can't hold without flag.
10 Aug 10, 10:13
soe: because I'm one of Karen, Rangoon university student in 8888.
soe: their blood is not dry yet. I understand that democracy is just not for burmese for all people in Burma.
10 Aug 10, 10:07
soe: we respect all people who dead in 8888.
ကိုကြီး: ဒေါင်းအလံမပါတဲ့ အမ်းအနားကို စိတ်မကောင်းစွာလာဖတ်သွားသည်
phyowai: အွန်လိုင်းမှာ မတွေ့တာ ကြာပြီ အစ်မ ငယ်နိုင် စာလာဖတ်ဖြစ်ပါကြောင်း
(C-Box ထဲက ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်)။
ကို Ye Min Tun, Ko Soe နဲ့ ကိုကြီးတို့ရဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါလို့ ခံစားရတာကို ကျွန်မလည်း ထပ်တူခံစားရလို့ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကို ရဲမင်းထွန်း ထင်သလို ခွပ်ဒေါင်းအလံကို ဗမာအလံလို့ ထင်ပြီး အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာလည်း မဟုတ်ဘူး အခမ်းအနားပြင်ဆင်တာ ABSDF Australia Branch က တာဝန်ယူတာ ဖြစ်လို့ တခြားဘယ်သူနဲ့မှ မဆိုင်ပါဘူး။ သီချင်းတွေကလည်း အရေးတော်ပုံကာလက သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေမို့ ပေါ့ပျက်ပျက် အနေနဲ့ သီဆိုထားတာ တပုဒ်မှ မပါဘူး ဆိုတာ ကျွန်မ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းစာသားတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်မ ထည့်ပေးပါ့မယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကိုရဲမင်းထွန်း ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ ကခုန်မြူးတူးနေတယ် ဆိုတာကလည်း သီချင်းရဲ့ Music အပေါ်မူတည်ပြီး အမူအရာကို လိုက်လုပ်နေတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစွာ ဆိုတဲ့သီချင်းကို ၀မ်းနည်းတဲ့အမူအရာနဲ့ဆိုမယ် မြူးတူးတဲ့သီချင်းကို မြူးတူးတဲ့ အမူအရာနဲ့ဆိုမယ် ဒါပဲကွာပါတယ်။ ဒီသီဆိုနေတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေက ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဘယ်လို စည်းလုံးညီညွတ်စွာ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဖေါ်ပြနေတာသာ ဖြစ်တယ်။ ရှစ်လေးလုံးဟာ ကျောင်းသားတွေ သွေးမြေကျပြီး အသက်ပေးသွားတာကို ဖေါ်ညွန်းသလို ရှစ်လေးလုံးဟာ တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူလူထုတွေဟာ ဒီမိုကရေးစီအရေးအတွက် ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကြီးအောက်မှာ ညီညွတ်စွာ လာရောက်စုဆုံမိတာကိုလည်း ဖေါ်ညွန်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအခမ်းနားမှာ ပါတဲ့သီချင်းတွေက ဒီနှစ်ခုစလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ သီချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ကိုရဲမင်းထွန်း နားလည်စေချင်တယ်။
ကိုစိုးကိုလည်း အနည်းငယ် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးမှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ပိုပြီးအလေးအနက်ထားအောင် လိုအပ်ချက် ရှိနေတဲ့ ကွက်လပ်ကို အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြတာကလွဲလို့ ဒီအတွက် အပြစ်တင်ရှုပ်ချလိုစိတ် လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဒီမှာ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်နေသူတွေဟာ ကလေးငယ်ငယ်လေးတွရှိတဲ့ မိသားစုတာဝန်တဘက်၊ အလုပ်တဘက် တကယ်ကို အနစ်နာခံလိုစိတ်ရှိလို့ အချိန်လုပြီး လုပ်နေရသူတွေ ဖြစ်တော့ ကျွန်မတို့ထက် ပိုအနစ်နာခံနိုင်သူတွေအဖြစ် ကျွန်မ သတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လုပ်တဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာ ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်။
August 10, 2010 at 6:42 PM Reply
သူငယ်ချင်း မဗေဒါ - မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မရှိလို့ မထည့်တာကတော့ ဟုတ်တာပေါ့။ နောက်နှစ်တွေမှာ ရှိအောင် လုပ်စေချင်လို့ ထောက်ပြတာ ဖြစ်တယ်။ ခွပ်ဒေါင်းအလံကို ရှစ်လေးလုံးမှာမှ စသုံးတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှုကြီးဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတရပ်လုံး ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်အောက်မှာ ညီညွတ်စွာ ဆုံစည်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် လုပ်တဲ့ အမှတ်တရ အခမ်းအနားမှာ တိုက်ပွဲဝင် ခွပ်ဒေါင်းအလံ မပါရင် မပြည့်စုံဘူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ပါတော့ ပိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့ ဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ်။ အဲဒါ နောက်ထပ်လုပ်တဲ့ အခမ်းအနားတွေမှာ ပါစေချင်လို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အငြင်းပွားလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မပါပါဘူး။
ဆိုနေတဲ့သူတွေက ဘယ်သူတွေဆိုတာ အောက်ဆုံးပိုဒ်မှာ ရေးထားပါတယ်။ အဲဒါ မစန်းစန်းမြင့်မဟုတ်ပါဘူး မျိုးဆက်သစ် ညီမငယ်လေးတဦးပါ။ မစန်းစန်းမြင့်က ဒီလောက်မငယ်တော့ပါဘူး။ မစန်းစန်းမြင့်ပုံလည်း စကားပြောနေတဲ့ပုံ ထည့်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ပြန်ကြည့်လိုက်ပါနော့်။
တမြန်နှစ်က ကျနော်တို့မြို့မှာ ၈၈၈၈ အနှစ်၂၀ပြည့်
အရောင်က အနီ။ဒေါင်းနီဖြစ်နေလို့ ခေတ်အဆက်ဆက် အ၀ါရောင်သုံးတဲ့အကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ရသေးတယ်။
မငယ်ပြောသလို ဒေါင်းနီဒေါင်းဝါမပါ ဒေါင်းဗလာကျင်းနဲ့
အခမ်းအနားကျင်းပတာဆို ကျနော်သာရှိရင် မငယ်လို ဝေဖန်မိဦးမှာပဲ။နောက်ဟာကွက်တခုထောက်ပြတာလဲ ဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ဘယ်နေရာ-ဘယ်ရက်မှာလုပ်တယ်ဆိုတာ ဆိုင်းဘုတ်ရေးလေ့ရှိသူတိုင်း သတိမလွတ်ရတဲ့ သတိပဌာန်အလုပ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
Ma Nge, Please amend The name for NLD Parliamentary ,should be U Tin Htut, not U Tin Tun.
Good to see the comment from others here. In real life, it isabit hard to organise the event under busy life. There are only few people spending their time, effort, and work under pressure for raising funds which we sent to refugees last year about AUD 2500, and this year, we raise AUD 2721 that will go to political prisoners in Burma. Yes, of course, there will be always things are not perfectly managed, but as long as the outcome, and the intention go for the struggle, we are making good effort. The other thing I want to emphasise here is that the entertainment in the event is meaningful and I give my great thanks to all involved such as Mono band, and Stereo band, Karen dance group organised by U Tha Kaw war.
Also, the whole day function is not organised by ABSDF, it is organised by many organisations, individuals afteralot of perparations. My point here is that you can be critique but also you can be proactive and supportive giving the comments. It is all up to you, but people who are doing for the struggle will still be doing and at this time, we should more focus on what we can do to finish the unfinished struggle.
ကိုနိုင်အောင် - ဦးတင်ထွဋ်နာမည် မှားနေတာ ထောက်ပြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ Fundrasing က 2721 ဒေါ်လာ တယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဒီအခမ်းအနားဟာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံက စုပေါင်းလုပ်တဲ့အခမ်းအနားဆိုတာလည်း ကျွန်မ ပို့စ်ထဲမှာ ဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ABSDF Australiaa Branch က စတင် အစည်းအဝေးခေါ်ကာ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ခွပ်ဒေါင်းအလံ ကိစ္စကတော့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေထက် ၈၈ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာပဲ အဓိကတာဝန်ရှိတယ်ယူဆပါတယ်။ ကိုနိုင်အောင် ပြောထားတဲ့ အခက်အခဲတွေကို အားလုံး သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကျွန်မက ကိုနိုင်အောင်တို့ကို အပြစ်တင်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ တကယ်ခံစားရတာနဲ့ လိုအပ်တယ်ထင်တာကို ထောက်ပြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်ကလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားမှာလည်း ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါလို့ ကျွန်မဒီလိုပဲ ခံစားခဲ့ရပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက ပို့စ်ထဲမှာ ကျွန်မ ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ အခမ်းအနားပြီးလို့ လုပ်တဲ့ အစည်းအဝေးမှာပဲ နောက်နှစ်ကျရင် ဖြစ်အောင်ထည့်ဖို့ အကြံပြုတော့ အားလုံးကလည်း လက်ခံကြတော့ ဒီနှစ်တော့ ခွပ်ဒေါင်းအလံပါလိမ့်မယ်လို့ အတိအကျ ထင်ထားပါတယ်။ အခမ်းအနားစတဲ့အချိန်မှာ ကျဆုံးသွားသူတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင် ခွပ်ဒေါင်းအလံကို အလေးမပြုလိုက်ရဘဲ အသက်ပေးသွားသူတွေအတွက် ၀မ်းနည်းတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ တမိနှစ်ငြိမ်ပြီးပဲ စခဲ့ရတာကို ကျွန်မ တကယ်စိတ်မကောင်းခဲ့ဘူး ဒါကိုပြောချင်ခဲ့ပေမဲ့ အကျိုးမရှိဘူးထင်လို့ ပို့စ်ထဲမှာ ဘာမှ မထည့်ခဲ့ဘူး။ အမှန်က ခွပ်ဒေါင်းအလံ မရှိရင် ပိတ်စနဲ့ ပုံဆွဲဖို့ ဆေးတွေဝယ်ပြီး ကိုရဲနိုင်ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဆွဲခိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီအပေါ်မှာ အပြစ်တင်လိုခြင်း ရည်ရွယ်ချက် လုံးဝမရှိဘူးဆိုတာ မှတ်ချက်လာပေးတဲ့ သူတွေကို အကြောင်းပြန်ထားတာတွေကိုရော ပို့စ်ကိုပါ အသေအချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် ကိုနိုင်အောင် သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
မဲဆောက်ဘက်က အခမ်းအနားတွေမှာတော့ ကမ္ဘာမကြေဘူးတပုဒ်ပဲ ဆိုတယ်။ ၈လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်နေ့နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးလို့ ထင်တယ်လေ။
တက်တက်ကြွကြွကြီး လှုပ်ရှားဆိုနေတာနဲ့ ကရင်ဒုံးယိမ်းကတော့ သိပ်မလိုက်သလိုပဲ မငယ်နိုင်ရေ။ အထိမ်းအမှတ်နေ့တွေထဲမှာ ဒီလိုနေ့မျိုးက အာဇာနည်နေ့လို ၀မ်းနည်းကြေကွဲဘွယ်နေ့မျိုးမဟုတ်လား။
မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဲဆောက်မှာ လုပ်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ ဒီမှာလုပ်တဲ့အခမ်းအနား ကွာတာက မဲဆောက်နဲ့ နယ်စပ်မှာ လုပ်တဲ့အခမ်းအနားက နိုင်ငံရေးသက်သက်ပဲ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီမှာလုပ်တဲ့အခမ်းအနားက နိုင်ငံရေး အနှစ်သာရရော Fundraiaing ပါပါတယ်။ ပြီးတော့ တက်ကြွစွာ သီဆိုတယ် ကခုန်နေတယ်ဆိုတာတွေကလည်း သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အနှစ်သာရအပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ ခုနက ကိုရဲမင်းထွန်းကို အကြောင်းပြန်ထားတာတွေကို အစ်မကိုလည်း ထပ်ပြီး ရည်ညွန်းချင်ပါတယ်။ နောက်ဥပမာတခု ပေးချင်တာက နစ္စ၊ ဂီတဆိုတာ ဘာသာရေးအရ အားမပေးပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးအပါအ၀င် တရားဓမ္မတွေကိုကျတော့ သီချင်းလုပ်ပြီး နစ္စ၊ ဂီတဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတာကို အားပေးတာ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီသီချင်းတွေထဲမှာ တရားတွေပါနေလို့ ခွင့်ပြုတာ ဖြစ်တယ်။ အခုလည်း ဒီမှာ ကခုန်မြူးတူးနေတာဟာ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဘယ်လို ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကာလက စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂံမြို့ဟောင်းတနေရာကို စပ်ဆိုထားတဲ့ တက္ကသိုလ် ဒို့ကျောင်းတနေရာဆိုရင်လည်း လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးနဲ့ ဆိုမှာ ဖြစ်သလို မြူးမြူးကြွကြွ စပ်ထားတဲ့သီချင်းကို မြူးမြူးကြွကြွ သီဆိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်ဒုံးယိမ်းကလည်း ညီညွတ်မှုကို ဦးတည်ပြီး သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းနဲ့ ကတာဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို Fundraising အတွက်လုပ်ရင်း လာတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို Message ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးအမြတ်က ရှစ်လေးလုံးမှာ ဒါတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ဒီလိုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ message ကို နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပဲလာတဲ့သူသတွေကို ပေးဖြစ်သလလို တကယ်ပါဝင်ခဲ့သူတွေအတွက် ပြန်လည်အမှတ်ရစေပါတယ်။ နောက်ပြည်တွင်း (သို့) နယ်စပ်ကို ပို့ပေးဖို့အတွက် Fundraising အတွက် ဖြစ်တဲ့အတွက် တချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ် အနေနဲ့ ဒါတွေကို တင်ဆက်တာ အကျိုးရှိတယ်လို့ ကျွန်မမြင်တယ်။ ကျွန်မ သဘောမကျတာကတော့ ခွပ်ဒေါင်းအလံမပါတာ တခုပါပဲ။
August 10, 2010 at 10:44 PM Reply
Please correct Greens party NSW MP name is "John Kaye" not "John Mccane".
He is one of longtime supporters for Burma cause and can visit his website at: http://www.johnkaye.org.au/
To review Burma issue on his website, please go to his campaigns tab.
August 10, 2010 at 11:23 PM Reply
အမဘာပဲပြောပြော တခုခုတော့လွဲနေတာ အမှန်ပါဘဲ ဆန္ဒပြတဲ့ပုံတွေလဲ ကျနော်လေ့လာပါတယ် ခွပ်ဒေါင်းအလံကို လုံးဝ မသုံးထားပါဘူး။ ထွက်ပြီးတော့တောင် ကလိုက်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ဘာမှ မလုပ်သာထက်စာရင် ပိုကောင်းသေးတယ်လို့ ဖြေတွေးပေးရမှာကို စိတ်မပါဘူး အသက်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အများကြီးပါနေလို့ပါ။ တခုခုတော့လွဲနေတာလို့ တွေးကိုတွေးရမှာတော့ အမှန်ပါ။ ရှစ်လေးလုံးအခမ်းနားနှင့် ခွပ်ဒေါင်းအလံ။ ကခုန်ခြင်းနှင့် ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနား။ အယူဆစွဲဘဲပြောပြော ရှေးရိုးအစဉ်လာသမားဘဲပြောပြော အကောင်းမမြင်ဘူးဘဲ ပြောပြော ကျနော်တော့ လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့်ရှိလို့ ထပ်ပြောခြင်တယ်။ (တစ်) ဒေါင်းအလံ မသုံးတာ(နှစ်) ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် က နေတာ လုံးဝမသင့်တော်ပါဘူး(အမရေ ဗျောတီးမယ့် နေရာမှာ ဒိုးပတ်တီးပြီး ငိုချင်းချရတဲ့ သဘောမျိုးတော့ ကျနော် မကြားဘူးပါဘူး)။ ထိုင်းနယ်စပ်မှ ဒေသခေါင်းဆောင်တွေ အောင်းမေ့ဖွယ် အခမ်းအနားတွေမှာလဲ မတွေ့မိပါဘူး (ကျနော်ဘဲ မျက်စိရှန်းလား မသိတော့ပါဘူး)။
ဒီလိုကျနော်တို့ ဖျော့တွေးပေးလိုက်ရင် ကြာလာရင် ရှစ်လေးလုံးအခမ်းအနားကို နိုင်ငံခြားရောက်မျိုးဆက်သစ်တွေမှာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားဆန်ဆန်တွေ အတွေးရောက်လာပါလိမ်မယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေနှင့် အထူးအဖြင့် လူဖြူတွေနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အခမ်းနားလုပ်တဲ့အခါ သူတို့က အမြဲတမ်းတော့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆိုင်ရာတွေကို ဖေါ်ထုက်ပေးဖို့ နှင့် သရုပ်ဖေါ်တွေကို လိုင်းတင်လာတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကိုတာဝန်ရှိသူတွေက အခမ်းအနားနှင့် မဆိုင်တာတွေကို သတိရှိရှိနှင့် ဖယ်ပြီး ပြင်ဆင်သင့်တယ်။ အခုအဖြစ်အပျက်ကို ကျနော်တို့ အဝေးကနေဘဲ ပြောနိုင်တာပါ။ စီစဉ်သူတွေ အနီးရှိသူတွေ ပိုသိပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းအလံမရှိလို့ မထည့်တာဆိုတာမျိုးကြီးတော့ အမရေ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ် ဒီလောက်ခမ်းခမ်းနားနားကြီး ကျင်းပနိုင်ပြီး။ ၅ပေ ၃ပေခွဲ အနီရောင် စာရွတ်(သို့)အ၀တ်စပေါ်မှာ ဒေါင်းရုပ်လို့ထင်ရအောင်ရေးရင်ကို ဒေါင်းအလံဖြစ်တဲ့ အလံကို မလုပ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီမှာ ဒေါင်းအလံကို မမေ့သင့်တဲ့ ရှောင်လို့ကို မရတဲ့ အဖွဲ့အစည်း လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲ အများကြီးပါ အမည်မတပ်လိုပါဘူး အပြုသဘောဝေဖန်နေတာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲမှ အစဘာအစွဲမှ မပါလို့ပါ။ အမြင်မတော် ဆင်တော်နှင့်ခလောက်လို တော်တော်လေး ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။
အမရေ စိတ်ခံစားမှုနှင့် ဆက်ရေးရင် အမှားတွေဝင်လာမယ် ဒီမှာဘဲ ရပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုလို ထောက်ပြဖေါ်ထုက်ရေးသားပေးတဲ့ အမငယ်နိုင်ကို လေးစားပါသည်။
August 10, 2010 at 11:39 PM Reply
ကိုရဲမင်းထွန်း ထောက်ပြတာ အကျိုးအကြောင်း ဆီလျှော်တဲ့အချက်တွကို လုံးဝလက်ခံပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်ရယ်လို့ မရှိတော့ ဒီလိုပဲ တဦးသတိမထားမိလိုက်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို တဦးက အပြုသဘောနဲ့ ထောက်ပြဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အပေါ်မှာ ကျွန်မ ပြောခဲ့သလိုပဲ အခုကိစ္စကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့တော့ သိပ်မဆိုင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ၈၈ က လာတဲ့ သူတွေရဲ့ အားနည်းချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် မဖြစ်အောင်တို့ ကျွန်မတို့ဝိုင်းဝန်း ကြိုးစားသွားရမှာ ဖြစ်တယ်။
John Kaye နာမည်ကို ထောက်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Anonymous. မှားနေတာကို ပြင်လိုက်ပါပြီ။
သီချင်းစာသားတွေကို ဗွီဒယိုအောက်မှာ ထည့်ထားပေးပါတယ်။ ဒီသီချင်းတွေဟာ ရှစ်လေးလုံး အခမ်းအနားနဲ့ သင့်တော်မတော်ဆိုတာ သီချင်းစာသားတွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြူးမြူးကြွကြွ ဆိုထားတဲ့ ညီညွတ်ရေးရဲ့ သွေးသစ်ဆီ သီချင်းဟာ ရှစ်လေးလုံးမှာ စပ်ထားတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပြီး ရှစ်လေးလုံးမှာ ဖြစ်ခဲ့တာကို မာန်ပါပါနဲ့ ဆိုတဲ့သီချင်း ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသီချင်းဟာ ရှစ်လေးလုံး အခမ်းအနားနဲ့ မအပ်စပ်ဘူးလို့ ဘယ်လိုမှ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။
August 11, 2010 at 4:57 AM Reply
ပို့စ်နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး ဒါပေမယ့် သိချင်လို့ပါ... လူမည်းနှစ်ဦးက မွေးဖွားလာတဲ့ လူဖြူကလေး အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲ
Anonymous မေးတဲ့ မေးခွန်းက မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ်တခု ဖြစ်တဲ့ အမျိုးရိုးဗီဇ ရောဂါများနှင့် အမွေဆက်ခံပုံ (၁) ( http://nge-naing.blogspot.com/2009/10/blog-post_27.html ) မှာ ဗမာမိဘနှစ်ဦးကနေ အဖြူ အမွှာကလေးနှစ်ဦး မွေးလာတာနဲ့ ဥပမာပေးပြီး Autosomal Recessive ခေါင်းစဉ်အသေးအောက်မှာ ကျွန်မ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒါကို အရင်သွားဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်။ ဖတ်ကြည့်လို့ မရှင်းမှ အဲဒီပို့စ်အောက်မှာ မေးခွန်းပြန်မေးရင် ကျွန်မ ပြန်ဖြေပေးလို့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။
August 12, 2010 at 4:16 PM Reply
ဒီနှစ် ၈-လေးလုံး အခမ်းအနားက အဖွဲ့ အစည်းတွေစုပေါင်းလုပ်တာ ဆိုပေမယ့် အခမ်းအနားပြင်ဆင်တဲ့တာဝန်ကတော့ ကျွန်တော်အပါအ၀င် ၃-၄ ယောက်မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။ ခွပ်ဒေါင်းအလံပါသင့်တယ်လို့ ဝေဖန်ကြတာကို ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ ဒါကျွန်တော့်ရဲ့ အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းပို့ တဲ့ မငယ် နဲ့ ဆွေးနွေးပေးကြသူအား လုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီး အခုလို ဆွေးနွေးဖြစ်တာရယ်၊ ၈-လေးလုံး ရဲ့ အဓိက အနှစ်သာရဟာ ဘာလည်းဆိုတယ် စဉ်းစားမိစေတယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုပါပဲ . .
August 13, 2010 at 7:49 PM Reply
ကိုအောင်နိုင်ရေ တာဝန်ယူပြီး တာဝန်ခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓတ်ကို လေးစားပါတယ်။ မှတ်ချက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုအောင်နိုင်တို့ ဘယ်လိုအနစ်နာခံပြီး အခက်အခဲကြားက လုပ်ရကိုင်ရတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ နားလည်ပြီးသား ဖြစ်တယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ အဲဒီအထဲမှာ အိမ်ကတယောက်လည်း ပါပါတယ်။ အခမ်းနား ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကာလတွေမှာ သီချင်းတိုက်ဖို့ သွားနေတာပဲ။ ကိုအောင်နိုင် လာမရေးခင် ဟိုနေ့က ကိုနိုင်အောင် မှတ်ချက်လာရေးပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်ကတယောက်က ကျွန်မကို မင်းက သူများ တာဝန်ပေးလည်း မယူ၊ ကိုယ်လည်း ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ သူများလုပ်တာကိုကျတော့ သွားဝေဖန်စရာလား အပြင်မှာတွေ့ရင် ပြောလိုက်လည်း ပြီးတဲ့ကိစ္စကို ဘလော့ဂ်ထဲမှာ ရေးစရာလားနဲ့ လာအပြစ်တင်နေလို့ ကျွန်မလည်း ကိုယ်မလုပ်ပေမဲ့ အမြင်မတော်တာ တွေ့ရင်မပြောရတော့ဘူးလား မနှစ်ကအကြံပေးတာ လက်ခံတယ်ဆိုပြီး မလုပ်လို့ အခုလူသိရှင်ကြား အကြံပြုတာလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ဒီကြားထဲ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းသလို လာလုပ်ပြီး ကျက်သရေမရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ မှတ်ချက် လာလာရေးနေတဲ့ ကိုဇော်မျိုးကိုလည်း အသိပေးလိုက်မယ်။ ကိုဇော်မျိုးမှတ်ချက်ကို ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ကျွန်မဘလော့ဂ်မှာ လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာ အပေါ်မှာ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အခုထပ်ပြီးသတိပေးလိုက်တယ်။
August 15, 2010 at 7:44 PM Reply
14 Aug 10, 00:27
မဗေဒါ (၈၈): တခါတလေ မန့်တွေ ဖတ်ရတာ မဆိုးပါဘူး.. အလုပ်တွေ ရူပ်နေပါသလား.. အသစ်မတင်လည်း လာခဲ့တာပါပဲ..အလည်သက်သက်သဘော..
ဘယ်ဆိုးမလဲ ဇော်မျိုးလာရေးတဲ့ ကျက်သရေမရှိတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို ဖျက်ထားတာကိုး၊ သူငယ်ချင်းလည်း သတိထား သူငယ်ချင်းဘလော့ဂ်မှာ သူ့မှတ်ချက်တွေ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ တွေ့နေရတယ်။ အရောဝင်လိုက်တာနဲ့ စွပ်ထားတဲ့ ကျည်တောက်ပြုတ်ကျပြီး ကောက်တဲ့အမြှီးကို နဂိုအတိုင်း တွေ့ရလိမ့်မယ်။ လုံးဝ တလေးတစားနဲ့ အရေးပေးဖို့ မစဉ်းစားနဲ့ မှားသွားလိမ့်မယ်။